Ahoana no hamahana ny Dow Jones Industrial Average
Social Sciences US Economy
Inona ny Dow Jones Industrial Average?
Fampahafantarana ny Dow, ny volany, ary ny fomba fiasa
Raha mamaky ny gazety ianao , mihaino ny radio , na mijery ny vaovao amin'ny alina amin'ny televiziona, dia efa renao angamba ny zava-nitranga tamin'ny "tsena" androany. Tsara sy mahafa-po tanteraka ny nahavitan'i Dow Jones 35 points amin'ny 8738, nefa inona no tena dikan'izany?
Inona no atao hoe Dow?
Ny Dow Jones Industrial Average (DJI), izay lazaina fa tsotra fotsiny hoe "The Dow," dia ny salanisa amin'ny tahiry 30 samihafa.
Ny tahiry dia mampiseho 30 amin'ireo tahiry lehibe indrindra sy be mpividy indrindra any Etazonia.
Ny endriny dia manamarika ny fivarotan'ireo orinasam-pandraharahana ao anatin'ny fivarotana fivarotana serivisy ao amin'ny tsenambola. Izy io no lahimatoa faharoa sady iray amin'ny teti-bola be mpividy indrindra any Etazonia. Ny Dow Jones Corporation, ireo tompon'andraikitry ny endriky, dia manova ny tahiry izay manara-maso ny singa indraindray mba hahitana tsara indrindra ny tahiry lehibe sy be mpividy indrindra amin'izao andro izao.
Ny volan'ny Dow Jones Industrial Average
Tamin'ny volana septambra 2015, ny singa 30 manaraka dia singa ao amin'ny Dow Jones Industrial Average Index:
3M MMM fitambaran'ny
paoma AAPL Consumer Electronics
Boeing BA Fiarovana sy fiarovana
sompanga CAT Fitaovana fanorenana sy fitrandrahana
Chevron CVX Oil and Gas
Coca Cola KO zava-pisotro
Dupont DD Chemistry Industry
ExxonMobil Xóm Oil and Gas
General Electric GE fitambaran'ny
Goldman Sachs FAA Banky sy tolotra ara-bola
Ny Home Depot HD Home Improvement Retailer
IBM IBM Computer and Technology
ny McDonald MCD Fast food
Procter & Gamble PG Fananana mpanjifa
mpandeha TRV Insurance
United Technologies UTX fitambaran'ny
Visa V Banky Consumer
Wal-Mart WMT Antsinjarany
Walt Disney Dis Famoahana sy fialam-boly
Ahoana no hamahana ny Dow
Ny Dow Jones Industrial Average dia vola miditra izay midika fa voaisa izany amin'ny fametrahana ny salanisan'ny salanisa amin'ny tahiry 30 izay ahitana ny endriky sy fizarana izany tarehimarika izany amin'ny isa iray antsoina hoe sehatra. Ny divizera dia tokony handray anjara amin'ny fisitram-bola sy ny fikambanam-bola izay mahatonga ny Dow ho lanjany ambony.
Raha toa ka tsy mitovy amin'ny isa avo lenta ny Dow, dia hihena ny mari-tsoratra rehefa tapitra ny fisakafoanana. Ho fanohanana izany, eritrereto hoe misy tahiry eo amin'ny singa sarobidy 100 dolara isam-paritra no mizara na mizara amin'ny tahiry roa isaky ny $ 50. Raha toa ireo mpitantana dia tsy nieritreritra fa avo roa heny amin'ny ampahany betsaka amin'ny orinasa toy ny teo aloha, ny DJI dia ho $ 50 ambany noho ny fisakanana ny tahiry satria ny ampahany iray dia mendrika $ 50 raha tokony ho $ 100.
Ny Dow Divisor
Ny divizora dia voafaritra amin'ny lanjany napetraka amin'ny tahiry rehetra (noho ny fitrandrahana sy ny fividianana) ary vokatr'izany dia miova matetika. Ohatra, tamin'ny 22 Novambra 2002, ny fizaramanina dia mitovy amin'ny 0,14585278, fa amin'ny 22 septambra 2015, ny fizaramanidina dia mitovy amin'ny 0.14967727343149.
Ny dikan'izany dia raha ny salan'isa ho an'ny tsirairay amin'ireo tahiry 30 ireo dia tamin'ny 22 Septambra 2015, ary nozarain'ity divizera 0.14967727343149 ity, dia azonao ny sandan'ny famaranana DJI tamin'io daty io izay 16330.47. Azonao ampiasaina ihany koa io fizarazarana io mba hahitana ny fiantraikan'ny tahirim-bolan'ny isam-batan'olona. Noho ny fomba fampiasa nampiasain'ny Dow, ny teboka iray na ny fihenam-bidy amin'ny tahiry dia hanana fiantraikany mitovy ihany, izay tsy mitovy amin'ny indices rehetra.
Dow Jones Industrial Summary
Noho izany ny laharana Dow Jones izay renao amin'ny vaovao isaky ny alina dia tsotra fotsiny ny salan'isa avo lenta. Noho izany, tokony ho ny vidiny fotsiny ny Dual Jones Industrial Average. Rehefa renareo fa niakatra 35 points ny Dow Jones, dia midika fotsiny fa ny mividy ireo tahiry ireo (raha jerena ny fizarazarana) amin'ny 4:00 tolakandro EST (tamin'ity andro famaranana ny tsena ity) dia mety ho 35 dolara fanampiny noho ny vidiny hividianana ny tahiry ny andro talohan'izay. Izay ihany no misy.
Tantara fohifohy momba ny fanavaozana ny Banky Taorian'ny Fifanakalozan-kevitra Vaovao
Ny toekarena taorian'ny ady: 1945-1960
Tantara momba ny fitomboana ara-toekarena Amerikana tamin'ny taonjato faha-20
Fitsipika sy fanaraha-maso ao amin'ny Toekarena Amerikana
Mahaliana ny momba ny trano fonenana any Etazonia
Fitomboana ara-toekarena: Fanodinkodinana, fampandrosoana, ary fiarovana
Ny anjara asan'ny governemanta amerikana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana
Laissez-faire Mifanohitra amin'ny fidirana amin'ny governemanta
Ny Amerikanina mandany ora 100 mahery isan-taona
Ahoana ny fomba fampiasana ny dansk Frantsay 'Dans'
Inona no atao hoe kamiao?
Mercantilism sy ny vokany amin'ny kolonialy Amerikana
Fomba ahoana no hanafoanana ny fofona mozika ao amin'ny korvety
Latina Verbs sy Infinitives
Fantaro ny fanomezana Shinoa Shinoa
Ny History of Breakdancing
Ny firenena Vatican dia firenena
Ny Sphinx amin'ny Legiona Grika sy Ejiptiana
Inona no atao hoe fanandramana?
Fandrobana ankolaka: Fitsipika 14-1b sy fitondra-jaza / famaizana azony ary voarara
Adidin'ny Wheelock College
Ahoana ny fomba ampianarana ny olon-dehibe mba hilomano
Sambo, Champagne, ary finoanoam-poana
Inona no atao hoe fanafody famonoana?
Ao amin'ny Gramma Anglisy, ny teny hoe "Concord" dia mifandray amin'ny fifanarahana iray
Ny boky momba ny boky Gruffalo
Tafiditra ao amin'ny Delphi momba ny fandaharana ny fampandrenesana Memory Leak
Geography Timeline: 13 fotoana manan-danja izay nanova ny fonenan'i Etazonia
Ahoana no handaminana ny fiarovan-tena tsara amin'ny basketball
Inona ny sekoly grady tahaka izao?
Taurus sy ny fifandraisana amam-pitiavana
Famaranana ny tetiarana
Nahoana ny rantsan-tànana no manisy rano?